Usebenzisa i-myMail njengeklayenti leposi ku-iOS naku-Android | Izindaba zamagajethi
i-myMail, iklayenti elihle kakhulu le-imeyili le-Android ne-iOS
i-myMail uhlelo lokusebenza oluhle ongalulanda futhi ulufake kumadivayisi wakho weselula, ngokuba iyahambisana womabili ama-akhawunti we-imeyili we-iOS ne-Android; Ngaphandle kokuthi i-Gmail (ku-Android) inesibonisi esilungiswe ngokuphelele futhi sihleleke kahle uma kukhulunywa ngokubheka ama-imeyili ethu, lokho iMyMail ebizosinikeza kona kuyinto elungiselelwe kangcono, konke okunobuhle obuhle futhi obunemibala, isici esingahle sibe kuthandwa abantu abaningi kulawa madivayisi eselula.
Ukuze ukwazi ukuba naleli thuluzi, kuzofanele uye esitolo (ku-Google Play noma ku-Apple Store), kungabi umsebenzi onzima ukwenziwa, ngoba kuzofanele sibeke igama lalo kwinjini yokusesha efanelekile okufanele ukwazi ukuyenza myMail kudivayisi yethu yeselula.
1 Ukufaka i-myMail kumodi ye-Android
2 Ukusetha i-Gmail ku-myMail
3 Imisebenzi ekhethekile yokuphatha isikhombimsebenzisi se-myMail
Ukufaka i-myMail kumodi ye-Android
Uma ungumuntu omusha ngokuphelele ngokuthola izinhlelo zokusebenza ezitolo ezahlukahlukene ze-Android noma ze-iOS, sizobe sisho ngendlela ecacile okufanele ukwenze ukuthola nokufaka leli thuluzi, yize sizolisebenzisa njengesibonelo esiyisisekelo I-Android.
Siqala uhlelo lwethu lokusebenza lwe-Android.
Kusuka kwideskithophu sichofoza ku-Google Play.
Ekusesheni sibhalele myMail.
Emiphumeleni sikhetha ithuluzi lethu myMail futhi ngemuva kwalokho, "Faka".
Siya kudeskithophu bese sichofoza isithonjana myMail.
Lezi yizinyathelo kuphela okufanele sizithathe ukufaka myMail, yize okwamanje sikhombe uhlelo lokusebenza lwe-Android; ngemuva kokuqalisa lolu hlelo, sizoqala sithole iwindi lesethulo, lapho kuzofanele sikhethe insizakalo esifuna ukuyilungisa ngaphakathi kwaleli klayenti, okungukuthi:
Uma unayo enye i-akhawunti ye-imeyili, kufanele ukhethe inketho ethi "Enye Imeyili", noma lokhu kusho ukuthi kufanele wenze amasethingi athile akhethekile; Ukuqhubeka nesibonelo sethu, sizokhetha i-akhawunti yethu ye-imeyili ye-Gmail.
Ukusetha i-Gmail ku myMail
Kusukela kokukhethwa kukho kwesikrini sesethulo esivele ngaphambilini, kufanele sikhethe kuphela insiza yakwa-Google (ye-imeyili ye-Gmail), okumele sibeke imininingwane yokungena ye-akhawunti yethu.
Iwindi elilandelayo esizolibona lifundisa kuphela, ngoba lapho myMail Izositshela ukuthi yimaphi amalungelo ezoba nawo ku-akhawunti yethu ye-imeyili; ngokwesibonelo, lapho kuzokhonjiswa ukuthi ithuluzi linamandla okuphatha ama-imeyili ethu phakathi kwezinye izinketho ezimbalwa.
Imisebenzi ekhethekile yokuphatha isikhombimsebenzisi myMail
Lokhu esesikubalulile kuze kube manje kungathathwa njengomsebenzi ojwayelekile okuhehayo kwawo okungadonsi amehlo; okubaluleke ngempela uma nje singena ukuhlola imilayezo yethu ngaphakathi kwe-akhawunti ye-imeyili ye-Gmail (noma enye into esiyisebenzisile enkonzweni). Sisebenzisa umunwe wethu esikrinini sokuthinta ezinhlangothini ezahlukahlukene zesikrini sizothola imisebenzi embalwa ekhethekile, lokhu okuyile:
Slayida isikrini phansi ngomunwe wethu. Lokhu kuzodala ukuthi ama-imeyili asanda kufika abuyekezwe ohlwini lokungenayo.
Slayida isikrini ngakwesobunxele ngomunwe wethu. Uma sibeka umunwe wethu ngakwesokunene ngokweqile futhi sislayida umunwe wethu kwesobunxele, kuzovela izithonjana ezimbalwa zokuqukethwe, ezizovumela: ukumaka njengokungafundiwe, okugqanyisiwe, ukuphendula umyalezo, ukudlulisa umyalezo noma ukuwuthumele emgqonyeni wokuphinda usebenzise kabusha .
Swayipha isikrini ngakwesokudla nge. Uma sibeka umunwe wethu ohlangothini olungakwesobunxele ngokweqile futhi ukusuka lapho, sislayida isikrini ngakwesokudla, amafolda noma amalebula esiwakhile ku-akhawunti yethu ye-imeyili azovela.
Kulesi simo sokugcina lapho sihlale khona, singakwazi futhi ukuncoma izinto ezimbalwa ezitholakala ngakwesokunxele kwesikrini; Lapho uphawu "+" lusho ukuthi kungenzeka kungezwe enye i-akhawunti ye-imeyili enkonzweni ka myMail (okungahle kube yiYahoo, i-AOL noma enye enye), kukhona nesondo elincane lamagiya elibheke ezansi, elizosisiza ukufaka ukumiswa kwalolu hlelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » i-myMail, iklayenti elihle kakhulu le-imeyili le-Android ne-iOS
Khubaza insiza ye-Windows 8 Store Store
IMediaFire Desktop, indlela elula yokusebenzisa i-10 GB efwini